Nyaya dzehama dzeGrimm. Anniversary yaWilhelm Grimm | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Fantasy, Nyaya
Wilhelm Grimm akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi kubva 1786 en Berlin, gore uye zvishoma gare gare kupfuura mukoma wake Jacob. Pamwe chete ivo vakanyora a zvisingakanganwiki nyaya dzevana nyaya inounganidzwa kubva pamuromo tsika. Mazita ekuremekedza senge Blancanieves, Cinderella, Iyo yakanaka durmiente o dzvuku Kutasva Hood, Mboro ine bhutsu o Hansel naGretel ivo chikamu cheyese tsika yekufungidzira. Nhasi ndinotaura zvishoma nezvavo uye nyaya mune zvese.
1 Tales pamusoro pezvose
2 Hama Dzangu Dzandinodisisa Grimm Tale
3 Mamwe maviri edhisheni pane ngano dzehama Grimm
Tales pamusoro pezvose
Tiri kurarama munguva, ngatitii, zvinyoro nyoro kune zvimwe zvinhu uye zvakasviba kune vamwe. Asi nezuro, nanhasi uye mangwana tsika yekutaura nyaya icharamba ichitiperekedza. Uye zvinofanira kudaro. Hapana hapana zvirinani kutanga kutsanangurira nyika kumwana uye kuti iye adzidze kufungidzira nekuzvigadzira. Ivo vanofungidzira zvese kuti vadzidze zvepasirese pfungwa uye manzwiro mune yavo yakachena mamiriro. Ivo vanosiyanisa zvakanakisa neyakaipisisa, yechokwadi chaizvo neinonyanya kunakidza, zvinangwa nezvazviri chaizvo. Uye pamusoro pezvose tiratidzeiwo zviroto zvedu uye vamwe vanotikurudzira.
Uye ivo vanofanirwa kuve vakadaro, vasina hafu yezviyero. Kushuva kwanhasi kwekuda kuchinja, kupfava kana kukodzera pfungwa dzakanangana ne izvo zvinofinha uye kazhinji zvinotadza sekusavimbika kwezvematongerwo enyika uyo anotarisira kupeta zvese kuti zvive nyore anga achidawo kana kuda kuzviita. Ndinovimba ini handibudirire uye mapere achiri mapere anotyisa anodya vasikana (kunyangwe kana ari mhuka dzinoshamisa kwazvo pasi rino kune munhu wangu anozvininipisa).
Panofanira kuva nevaroyi vakaipa kwazvo Musungo vana vasingafungire mune inonaka chokoreti uye dzimba dzenzwi. Y kittens dzakangwara kwazvo kuti, nebhutsu dzemaligi manomwe, vanowana hupfumi hwese kuna tenzi wavo (uye vanodzidzisa vana - uye vazhinji vakuru - chiri chibvumirano). Kana, zvingasave sei kakashinga kamusoni munguva dzemakwikwi evanodzidzira kusona. Uye ini ndichagara ndichida kuve Cinderella kuona kana muchinda akanaka rimwe zuva nditorere bhutsu inokwana ini nemabhanga angu. Ndinoziva zvevamwe vanoita zvechikadzi vane tsoka.
Hama Dzangu Dzandinodisisa Grimm Tale
Chaizvoizvo, ini ndinovada vese, asi ini ndinogona kuratidza imwe nekuda kwezvikonzero zvekuda: Mhumhi uye Vana vadiki vanomwe. Ndiyo iya yandino gara ndichirangarira kana ndichitaura nyaya. Nekuti Ndiri kuenda kunguva yakatopararira yehudiki, iyo inorasika pakati pehusiku neusiku, asi mairi iri yakajeka Inzwi rababa vangu, Zvekuti ndakazvichinja zvinoenderana nevana vadiki kana hanzi mbichana ichindiudza nezvazvo. Ndiratidze gumbo rako nepasuwo, ndinonzwa. Ipapo ini ndaigara ndichifungidzira izvozvo Mhumhi inonyengera kunamira tsoka yake muupfu kupusisa mbudzi uye uzviputire zvisingazivikanwe apo vasina mhaka kwazvo vakawira mumusungo.
Nguva yacho yaityisa sezvainakidza, ichizoguma nekufadza kukuru. amai vekunetseka pavakakwanisa kuvabvisa mudumbu remhumhi, avo vakarara mushure mekuguta, ndokuvachinjanisa nematombo. Uye muchikamu icho chisina kujairika icho zvakare chakave nacho muhucheche, mufaro wekuguma kunofadza kwakashatiswa zvishoma, vasingazive, nemhedzisiro iyoyo yaigara yakanyanya kubvuta mhumhi. Ehe, anga aine hasha, anoreva nhema, uye akaipa uye angafanirwa nemhedzisiro iyoyo, asi yaigara iri nguva yake.. Ndosaka izvozvi, nezera, ini ndine rudo rukuru nekuvayemura uye ndinodyawo vana nekunakidzwa.
Mamwe maviri edhisheni pane ngano dzehama Grimm
VaGrimms vakaunganidza idzi ngano dzevanhu kubva mutsika yemuromo mune basa rakatumidzwa Nyaya dzevana nedzemumba (1812-1822). Nekufamba kwenguva kune zvakawanda zvisingaverengeke zvemazuva ano zvinodzokororwa zvakaitwa nemazita akadai se Iyo Ngano Dzenhau dzeHama Grimm o Ngano yehama dzaGrimmkunyangwe dai vasina kuzvigadzira. Asi ngatitii ivo 'vakapihwa' nenzira yavo ivo vairemekedza iko kutsva uye kusagadzikana kwetsika ngano uye vaisada kuzvinyorazve nenzira yehunyanzvi kana yekunyora.
Kwangu chikwereti ndidzo idzi mbiri shanduro:
Ngano dzehama Grimm, ivo Noel daniel. Iyo edhisheni idombo rine yakanaka yakajeka mifananidzo. Ndakatotaura nezvake mukati ichi chinyorwa.
Hama Grimm ngano dzemazera ese, ivo Philip Pullman, uko munyori anozivikanwa wechiRungu, munyori weatatu Nyaya yakasviba, akasarudza hama dzake makumi mashanu dzaanoda hama, uye anovaudza nenzira yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nyaya dzehama dzeGrimm. Wilhelm Grimm Anniversary
Yangu yandinofarira Hama Grimm nyaya ndeye Mashizha Matatu eNyoka.
Kunyangwe zvavo nyaya dzave kuongororwa zvakanyanya nekufamba kwenguva, ini ndichiri fan wevaya vane rima shanduro dzavakatiudza pakutanga, vachitiratidza kuti nyika haisi yenguva dzose ngano. Munyaya yandangotaura pane kuda, kutengesa uye kutsiva, chimwe chinhu chandinoda manyorerwo aive nevanyori ava. Isu taigara tichitenda kuti ivo vari kunyorera vana, asi kutaridzika kunogona kunyengera.
Yakanaka chinyorwa, ndinokutendai zvikuru nekurudziro.
Pindura kuna https://relatoscortos.org/ ngano-vacheche /
O Calle para Siempre: Chikamu chechipfumbamwe cheMariana de Marco chakateedzana chinorova zvitoro zvemabhuku.